Horjooge Bashiir Qoor-gaab oo duqeyn lagu dhaawacay | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Horjooge Bashiir Qoor-gaab oo duqeyn lagu dhaawacay
Horjooge Bashiir Qoor-gaab oo duqeyn lagu dhaawacay
Duqeymo geystay khasaare baaxad ah oo Al-shabaab lagula beegsadey degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa sii ballaariyey kala shaki kooxda dhexdeeda ka jiray.
Xog ay heshay Warbaahinta Qaranka ayaa muujineysa in duqeyntaan ay geysteen diyaaradaha wax dila ee aan duuliyaha lahayn xilli wagga uu baryey maanta oo Arbaco ah degmada Jilib.
Duqeymaha ayaa dhacay laba xilli iyadoo duqeyta koowaad ay ka dhacdey Guriga Martida degmada Jilib ee Al-shabaab oo wakhtigaas ay wada joogeen horjoogeyaal ka shirsan khilaafka kooxda iyo malleeshiyaad tira badan oo xarun ay u aheyd gurigaas.
Dhimashada duqeynta ayaa la xaqiijiyey in ay gaareyso 19 malleeshiyo oo ay ku jiraan qaar ka mid ah horjoogeyaashii shirka fadhiyey, dhaawacuna uu ka badan 20.
Duqeynta labaad ayaa ka dhacdey guri uu deganaa Horjooge Bashiir Qoor-gaab.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa muujinaya in Bashiir Qoor-jaab uu soo gaaray dhaawac halis ah duqeynta labaad, isla markaana loola cararay meel bannaanka ka ah degmada Jilib oo qiyaastii dhowr iyo tobban km jirta.
Malleeshiyada Kooxda ayaa bilowdey in ay diidaan isu socodkii dadweynaha ee degmada Jilib si ay Meesha uga saaraan in la ogaado khasaaraha sii kordhaya ee weerarradii saaka waabarigii lagu qaaday AL-shabaab ka dhashay.
Dhinaca kale waxaa jira walaac ka dhashay wararka laga helayo geeridii Hoggaamiyihii Al-shabaab Axmed Diiriye oo loo yaqaanno Abuu Cubeyda, horjoogeyaasha qaar oo laga qariyey macluumaadkaas ayaa ka caroodey oo bilaabay in ay shiriyaan ragga ka hoose iyo maleeshiyaad badan si ay tallo ugu yeeshaan ama ay qeyb ka noqdaan hoggaanka cusub ee kooxda Al-shabaab yeelan doonto geerida Axmed Diiriye kaddib.
Horjooge Mahad Karataay ayaa la sheegayaa in uu ololle xooggan ugu jiro sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa hoggaanka kooxda, laakiin Xuseen Fiidoow iyo rag kale oo uu ka mid yahay Cali Dheere waxa ay shaaciyeen in hoggaanka kooxda si KMG ah u sii heyn doono Xuseen Cali Fiidoow oo ay isku heeb yihiin Cali Dheere, taasna waa midda oo shaac bixisay khilaaf xooggan oo ka dhex qarxay Al-shabaab.
Horjoogeyaasha qaar ayaa ka walaacsan halka ay ku dambeyn doonto xaaladdooda shaqsiyaddeed kaddib markii ay ogaadeen in kala dilasho hoggaanka Malleeshiyada Al-shabaab uu ka dhex socdo kooxda.
Previous articleTaariikhda halgalkii xorriyadda Jabuuti
Next articleHorjoogihii Al-shabaab oo la sheegay in uu geeriyoodey